မိုးကောင်းကင်: ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး ထားစေချင်သည်
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:15 PM
စိတ်မကောင်းဘူး.. ကားနဲ့တိုက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်မှာ ကားသမားက ဘာမှမဖြစ်တဲ့အတွက် ကူညီသင့်တာ မဟုတ်ဘူး.. သူ့မှာတာဝန်ကို ရှိတာပါ..။ အဲလို ဥပက္ခာပြုခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ဥပဒေက ဘယ်လောက်ပဲ ဒဏ်ပေးပါစေ.. တသက်လုံး သူ့စိတ်က အေးချမ်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အထင်ရှိပါတယ်..။
ဒီလို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ခေါင်းပါးလာတာကြောင့် မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်လာကြရတာပါ။ ထွက်ပြေးလို့လဲ ရာဇ၀တ်ဘေးကနေ ပြေးလို့လဲ မလွတ်ပါဘူး.. သူ့ရဲ့ တာဝန်မဲ့တဲ့ စိတ်ကြောင့် လူတစ်ယောက်အသက် မဆုံးရှုံးသင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးရတယ်..
ဒီလိုလူမျိုးတွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါစေ။။
လူ တွေ က များသောအားဖြင့် ကိုယ့်  အတွက်
ကိုယ် အရင် ကြည့်  တတ်ကြ တာများ တယ်လေ၊
သူ များ အပေါ် စာနာ စိတ် ထား ဘို့  ဆိုတာကတော့ 
နူးညံ့  တဲ့  စိတ်နေ စိတ်ထား ရှိ ဘို့  အရင် လိုအပ်
နေပါတယ်၊ ဒါက လဲ ကြိမ်ဖန် များစွာ ဖြည့်  ကျင့် 
နေမှ ရ မှာပါ ။ စာနာ တတ်တဲ့  သတ္တိ တစ်ခု လို့ 
ခက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော် ခုထိ ကားပိုင် လုံးဝ မရှိဖူးသေးပါဘူး။ ဝယ်လဲ မဝယ်နိုင် မကပ်နိုင်ဘူး။
တိုက်ပြီး မောင်းပြေးတာ ဆိုးလဲ ဆိုးတယ်။ ခက်တာက မောင်းမပြေးရင် အချုပ်ထဲ ရောက်မယ်၊ ထောင်ကျမယ်ဆိုတော့ တိုက်မိတိုင်း မောင်းပြေးကြတာ အများစု ဖြစ်နေပြီ။
ကားနဲ့ တိုက်ပြေးသူများ အတိုက်ခံရတဲ့ သူနေရာမှာ ကိုယ့် မိသားစု တယောက်ယောက် ဆိုတာကို အစားထိုးကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်ချင်းစာ တရားလေး ရှိနိုင်မယ်ထင်တယ်
ကိုဇော်သိင်္ခရေ အဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကတော့ မန်းရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ ခဏခဏကြုံရလွန်းလို့ထုံနေ ပါပြီဗျာ။ အရင်တုန်းကတော့ ဒီလူတွေဘယ်လိုလည်း ဆိုတာခဏခဏဒေါသဖြစ်ရတာပါ။ နောက်တော့လည်း ကိုယ်ကပဲနေတတ်သွားလို့လား သူတို့ပဲတအားပေါသွား လို့လားမသိဘူး နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတာပဲဗျို့။ အဲတော့လည်း သြော် သဗေသတ္တာကမ္မသကာ ပဲလို့မှတ်ရတော့တာပေါ့ဗျာ။
မှန်တယ် မည်သူမဆို. အားလုံးကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိနိုင်ပါစေ.
ဒါနဲ့ ခင်ဗျားကရော ဘာလုပ်ပေးခဲ့သေးလဲဗျ..။
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများ ကိုယ်ချင်းစာတရားလေး ထားကြပါဗျ ဆိုတော့ မိတ်ဆွေတွေကပဲ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ကင်းနေသလိုလို.. ။
လူတွေ လူတွေ သူများကိုပဲ ဆရာကြီး အရမ်းလုပ်ချင်ကြတာ..။
ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူဒီလိုပဲ မောင်းပြေးသွားမလား